dhimashadu waa 49 qof,Ra’isul Wasaaraha New Zealand Oo Ka Hadashay Weerar Lagu Qaaday Masaajid “Weerarka Masaajidka waa mid Argagixiso” | Biyoguurenews.com
Home Wararka dhimashadu waa 49 qof,Ra’isul Wasaaraha New Zealand Oo Ka Hadashay Weerar Lagu...
dhimashadu waa 49 qof,Ra’isul Wasaaraha New Zealand Oo Ka Hadashay Weerar Lagu Qaaday Masaajid “Weerarka Masaajidka waa mid Argagixiso”
BBC: Dadka ku dhintay masaajidda Australia ayaa hadda noqday 49.
Taliyaha booliiska dalka New Zealand ayaa qabtay shir jara’id oo uu dadka kula wadaagayo wararkii ugu dambeeyay ee weerarka lagu qaaday dadka cibaadaysanaya.
Mid ka mid ah dadkii dhaawaca ahaa ee la dabiibayay ayay hadda naftu ka baxday ayuu yiri isaga oo shirka jaraa’id sii wada.
Ra’isulwasaaraha New Zealand haweenayda lagu magacaabo Jacinda Ardern
ayaa dhacdada ku tilmaamtay maalintii ugu madoobayd ee soo marta taariikhda dalkaas.
“Ma jirto wax ka yar argagixiso oo aan ku tilmaami karo waxa dhacay” ayay tiri haweenaydan oo tacsiyo u dirtay dhammaan ehalada dadkii ku waxyeeloobay.
Dhanka kale ay xaqiijinayaan illo wareedyo kala duwan oo ay BBC-da la xiriirtay, mid ka mid ah masaajidada weerarka lagu qaaday maanta ee magaalada Christ Church ee dalka New Zealand ayaa waxaa qeyb ahaan maamulkiisa hayay dadka Soomaali ah.
Ibraahim Cumar Baafo oo ah wariye Soomaaliyeed ayaa BBC-da u sheegay in uu hadda ka hor booqday masaajidkaas, yahayna mid ay Soomaali maamulkiisa haysay.
“Waxaa masaajidka aad loogu xusuustaa xilligii uu dhul giriirka ka dhacay magaalada Christ Church waxa uu ahaa halkii Soomaalida ay ka fureen jikada cuntada bisil lagu diyaariyo, halkaas oo laga quudinayay dadkii ku waxyeeloobay dhulgiriirka” ayuu yiri Baafo oo hadda ku sugan dalka Australia oo daris la ah.
Warar soo baxaya oo kale ayaa sheegaya in ay dad Soomaali ah ka mid yihiin dadka lagu laayay masaajidka, balse tirakoobka kama dambeyska ah weli lama xaqiijin karo.
Wariye Ibraahim Baafo ayaa yiri “Waxaa la ii xaqiijiyay in ay dhinteen 4 qof oo uu ku jiro wiil yar oo 4 jir ah, aabihiisna uu dhaawacmay”.
Illaa 49 qof ayaa lagu dilay weerar salaadii jimcaha ka hor lagu qaaday labo masaajid oo ku yaala dalkaas si uu xaqiijiyay taliyaha booliiska.
Ninkii weerarka geystay ayaa iska duubay muuqaal uu xitaa wajigiisa ku qabanayo kaamirada, kadibna waxa uu galayaa masaajidka isaga oo ku hubeysan qoriga darandooriga u dhaca, wuxuuna markaliya rasaas oodda kaga qaadayaa dad koox koox u fadhiya meelo kala duwan masaajidka.
Waxa ay u egtahay in kaamirada ay ugu xirantahay koofiyad ama ookiyaalaha.
Booliiska waxa ay sheegeen in ay xireen illaa 3 nin iyo qof dumar ah oo la tuhunsanyahay.
Previous articleGolaha Senate-ka Mareykanka oo diiday dagaalka Yemen
Next articleMadaxda dunida oo ka fal-celiyey weerarka New Zealand markalaga reebo donal trump